China POWDER METAL CONTACTS Mpanamboatra sy mpamatsy | ZHJ
Vidin'ny FOB: US $ 0,05 - 5,00 / Piece
Ireo fitaovam-pifandraisana AgC dia mampiseho fanoherana avo lenta amin'ny welding welding sy fanoherana ambany. Ny fanoherana ny welding dia mitombo amin'ny fitomboan'ny atiny grafita. Ireo fitaovan'ny AgC dia manana fitondran-tena mahalefaka tena rehefa ampiasaina ho toy ny fifandraisana mihodina.
Ampiasaina amin'ny switch switch toy ny MCBs, MCCBs, switch miaro amin'izao fotoana izao, na switch switch an'ny maotera. Ny fampiharana dia matetika amin'ny lalao asymmetric amin'ny AgNi, AgW, AgWC na Cu.
C Atiny (wt.%) 3 ± 0,5 4 ± 0,5 5 ± 0,5 3 ± 0,5 3.8 ± 0,5 4 ± 0,5
Elec.Resistivity (.10 • cm) ≤2.10 ≤2.20 ≤2.30 ≤2.10 ≤2.20 ≤2.20
Hamafin'ny HV ≥42 ≥42 ≥42 ≥42 ≥42 ≥42
Ny fifandraisana vita amin'ny AgW dia mampiseho fanoherana mahery vaika amin'ny fanoherana welding ary fanoherana avo lenta noho ny fikaohon-tsetroka noho ny teboka miempo avo sy ny hamafin'ny W, izy ireo koa dia manana fifehezana elektrika sy hafanana tsara.
Ny fitaovana AgW dia ampiasaina amin'ny MCCB malefaka ambany sy ACB ary switch switch.
Ag Content (wt.%) 50 ± 2 45 ± 2 40 ± 2 35 ± 2 30 ± 2 25 ± 2
Hamafin'ny HV ≥100 ≥110 ≥120 ≥130 ≥145 ≥160
Fomba fanamboarana Infiltration
Ny fitaovam-pifandraisana AgWC misy ny WC singa marefo dia manana hamafin'ny kery sy fanoherana fitafiana mekanika, fironana ambany amin'ny fantsom-pifandraisana, ary fanoherana fifandraisana azo antoka amin'ny serivisy. Ny fifandraisana AgWC dia novokarin'ny fidiran'ny metallurgy vovoka.
Ampiasaina matetika amin'ny fitaovana fanovana mavesatra andraikitra, toy ny fanaparitahana faribolana. mpandika faritra misy ankehitriny. Amin'ny tranga maro dia ampiasaina amin'ny lalao asymmetric amin'ny AgC izy ireo
Ag Content (wt.%) 65 ± 2 60 ± 2 50 ± 2 35 ± 2
Elec.Resistivity (1.10 • cm) ≤3.30 .A.50 4,50 5,20
Hamafin'ny HV ≥100 ≥125 ≥135 ≥155
Noho ny atin'ny Ag avo dia ambany ny fanoherana ny fifandraisana amin'ny AgWCC. Izy ireo dia manana fananana fanoherana avo lenta avo lenta noho ny fananana karbida tungsten sy grafita misy teboka miempo ambony. Ny fifandraisana AgWCC dia amboarina amin'ny alàlan'ny fanivanana.
Ampiasaina matetika amin'ny fitaovana fanovana mavesatra andraikitra, toy ny fanaparitahana faribolana. mpandika faritra misy ankehitriny. Amin'ny tranga maro dia ampiasaina amin'ny lalao asymmetric amin'ny AgNi, AgW na AgWC izy ireo.
Ag Content (wt.%) 85 ± 1 75 ± 1 79 ± 1 74.5 ± 1
Hamafin'ny HV ≥50 ≥80 ≥60 ≥75
Fomba fanamboarana Fampifangaroana-Compacting-Sintering
Ny fifandraisana AgNiC dia manambatra ny tombony amin'ny fifandraisanaAgNi sy AgC. Manana fanoherana tsara amin'ny fikaohon-tany sy ny fananana manohitra ny welding izy ireo.
Ny fifandraisana AgNiC dia ampiasaina amin'ny MCCB, ACB.
Ag Content (wt.%) 67 ± 1 73 ± 1 94 ± 1
Elec.Resistivity (.10 • cm) ≤4.50 ≤3.50 ≤3.50
Hamafin'ny HV ≥50 ≥60 ≥30
Ny fitaovam-pifandraisana CuW dia manana fanoherana tsara hanoherana ny fikaohon-tany sy ny fananana manohitra ny welding ka hatrany amin'ny volavolan-dalàna avo dia avo. Ny fifandraisana CuW dia novokarina tamin'ny endrika maro isan-karazany tamin'ny alàlan'ny metallurgy vovoka (fanindriana / fanoratana na fanatsofohana). Ny atin'ny tungsten dia 50% -80%.
Ny fifandraisana CuW dia matetika ampiasaina amin'ny switchgear malefaka sy antonony. Fampiharana mahazatra dia ao amin'ny mpanamory boribory avo lenta, switch switch, switch changer switch changers ary fifandraisana amin'ny arctie ambany.
Ho fanampin'izany, ny akora CuW dia be mpampiasa ho toy ny electrodes, indrindra ho an'ny welding.
Cu Content (wt.%) 50 ± 2 40 ± 2 30 ± 2
Hamafin'ny HV ≥115 ≥140 ≥175
Previous: Tariby firaka volafotsy
Manaraka: Mombamomba namboarina
Fifandraisan'ny Powder AgC
Fifandraisana amin'ny vovoka AgW
Fifandraisana amin'ny vovoka AgWC
Fifandraisana amin'ny vovoka AgWCC